किन बस्दैछ एमाले स्थायी समिति बैठक ? - Dainik Nepal
किन बस्दैछ एमाले स्थायी समिति बैठक ?
दैनिक नेपाल २०७४ फागुन १० गते १३:२८
काठमाडौँ, १० फागुन । सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटामार केहीबेरमा बस्ने बैठकमा सरकार विस्तार, पार्टी एकता र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ ।
प्रधामन्त्री ओलीले बिहीबार नै सरकार विस्तार गर्ने सोच बनाएका छन् । बैठकमा सरकारमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ । साथै, पार्टी एकताका लागि गठन भएको कार्यदलमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि केही कुरा हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् । बिहीबार मात्रै बालुवाटारमा एमाले–माओवादी संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेको थियो । कार्यदल बैठक अघि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुवै नेता आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरि बिहीबार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
एमालेबाट मन्त्री बन्ने संभावनाको सूचीमा भीमबहादुर रावल, इश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, रघुवीर महासेठ, सुमन प्याकुरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, पार्वत गुरुङ, गोकुल बास्कोटा, रामवीर मानन्धर, जगत विश्वकर्मा, पदमा अर्याल, धनबहादुर बुढा, नवराज रावत, प्रेम आले, गणेशसिंह ठगुन्ना रहेका लगायत रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घट्ने र सत्तासाझेदार माओवादीले ७ वटासम्म मन्त्रालय माग गरेपछि यीमध्ये धेरै नेताको यसपाली मन्त्री बन्ने यात्रा रोकिनेछ । यसअघि एमालेबाट लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मगर मन्त्री भइसकेका छन् ।